छापा मार्नु अघि मातृका यादवले कालिमाटी तरकारी बजारमा के–के गरेका थिए
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ ८, २०७५
काठमाडौँ– कालिमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरी छापा मारेको विषयलाई लिएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ । कालिमाटी तरकारी वजारमा दोषी देखिएका व्यपारीलाई कारवाही गर्ने प्रकृया शुरु भइरहेको बेला उद्योग मन्त्रालयले छापा मारी आफ्नो ढंगबाट कारवाही प्रकृया शुरु गरेपछि कृषि मन्त्रि चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले आफ्नो मन्त्रालयमा हस्तक्षेप भएको भनेका छन् ।
मन्त्री खनालका एकजना सहयोगीले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयले छापा मार्नु गलत होइन, तर एकपटक समन्वय गर्दा हुन्थ्यो किनभने कृषि मन्त्रालयले त्यहाँ कारवाही प्रकृया शुरु गरिसकेको थियो ।’ कृषि मन्त्री खनालले गत जेठ २४ गते विहानै कालमाटी फुलफुल तथा तरकारी वजारको अनुगमन गरेका थिए ।
अनुगमनबाट किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म आइप्ग्दा धेरै महंगो हुने गरेको, कालीमाटीसम्म तरकारी ल्याउँदा तीन चारवटा तह पार गरि ल्याउनुपरेको, बजार र स्टल कब्जा गर्ने काम भएको, एउटा स्टलको ८ देखि १० हजार मात्र पर्छ तर विचौलियाले २ लाखसम्ममा भाडामा लगाएको, एउटा व्यक्तिले १५ वर्षसम्म बस्न पाउने कार्यविधि छ तर वर्षौदेखि एकैजना बस्दै आएको जस्ता समस्या मन्त्री खनालले फेला पारेका थिए ।
त्यो दिन अनुगमनपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘एक छिनलाई प्रचार गर्न र तमासा देखाउन यो गरिएको होइन । ढिलो चाँडो यसलाई ठिक पारिन्छ ।’ अनुगमनपछि मन्त्री खनालले कालिमाटीको व्यथितिको बारेमा छानविन समिति बनाएका थिए ।
त्यो छानविनले दिएको प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारवाहीको प्रकृया शुरु पनि गरेका थिए तर व्यवसायीले त्यहाँका व्यवस्थापनमाथि मुद्दा दायर गरे । मुद्दा दायर भएपछि मन्त्रालयबाट हुने कारवाही प्रकृया केही दिनका लागि स्थगित भएको थियो ।
त्यसरी कारवाही अवरुद्ध हुने गरि मुद्दा दायर गरेपछि मन्त्री खनालले असार १५ गते एक पत्रकार सम्मेलन गरी भदौसम्म कालीमाटीमा सुधार नदेखिए कडा कदम चालिने जानकारी गराएका थिए । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘यो बीचमा कालिमाटी तरकारी बजारमा सुधार नदेखि त्यो बजार नै हटाई दिन्छौ । हामी स्थलगत अनुमगनमा जाँदा कालिमाटी बजारमा रहेका ९९ वटा स्टलहरुलाई सुधार अति आवश्यक छ । भदौसम्म सुध्रने मौका दिएको छौं । यदि सुध्रिएन भने मन्त्रालयले कडा कदम चालिनेछ ।’
यसरी मन्त्री खनालले त्यहाँका व्यापारीलाई कारवाहीको प्रकृया शुरु गरेकै अवस्थामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव बीचैमा भाँजो हालेपछि समस्या भएको मन्त्री खनालको बुझाई छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौं ४ गते विहान ३ बजे गएर कालीमाटीमा पुनः छापा मारेको थियो । तर कृषि मन्त्रालयले चार महिनाअघि छापा मारेको थियो ।
मन्त्रालयले कारवाही गर्ने प्रकृया शुरु गर्दा त्यहाँका व्यवसायीहरु त्यतिकै तनाव थिए । त्यहीबेला अर्को मन्त्रालयले छापा मार्दा व्यावसायीहरु क्रुद्ध भएका थिए । एकातिर एउटा मन्त्रालयले भदौंसम्म सुध्रिने चेतावनी दिएको थियो, अदालतमा मुद्दा थियो, कालिमाटी तरकारी वजार व्यवस्थापनले स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने अर्कोतिर फेरि अनुगमन भएपछि व्यवसायीहरुमा तनाव बढेको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले छानविन गरेरै दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्ने भनिरहेकै बेला उद्योग मन्त्रालयले छापा मार्दा व्यापारीहरु नसुध्रिएको पुष्टि भएको छ । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा कार्यविधि उलंघन गरेर व्यवसायी गर्ने व्यापारीलाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न दिएको एक हप्ताको म्याद असार ३ गते सकिएको थियो ।
जेठ २७ गते त्यहाँका व्यपारीहरुलाई पत्र बुझाउन शुरु गरिएको थियो । समयमै पत्र बुझ्न नआएकाहरुको स्टलमा पत्र टाँसिएको थियो । पत्र बुझिसकेपछि उनीहरुबाट आएका स्पष्टीकरणका आधारमा असार ९ गतेदेखि कारवाही शुरु गर्ने तय भएको थियो । तर, व्यापारीहरुले असार ४ गतेनै मुद्दा दायर गरिदियो ।
मन्त्री खनालले तरकारी बजारमा छापा मारिसकेपछि जेठ २५ गते बोर्डको बैठक बसेको थियो । बोर्डको बैठकले त्यहाँका व्यपारीलाई चार भागमा वर्गीकरण गरेको थियो ।
–कार्यविधि पूर्णरुपमा उलंघन गर्ने ९९ जनालाई रातो
–अलि कम उलंघन गर्ने १३१ जनालाई निलो
–फाट्टफुट्ट नियम उलंघन गर्ने २०९ जनालाई पहेलो
–पूर्ण रुपमा नियम पालना गर्ने व्यापारी १५९ जना
असार ३ गतेसम्म रातो समूहमा पर्ने ९० जनाले स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए । असार ९ गतेपछि बस्ने बोर्ड बैठकले उनीहरुमाथि करवाही गर्ने प्रकृया शुरु गर्ने तयारी थियो । ९९ जनामध्ये एक दुई जना बाहेक सबैको इजाजतपत्र खारेज गर्ने तयारी कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको थियो ।
निलो समूहमा परेका १३१ जनामध्येबाट झण्डै २०/२५ जना रातो समूहमा पर्ने देखिएको थियो ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार तरकारी वजारमा अनियमितता गरेका र दोषी देखिएकालाई पहिचान भइसकेको थियो । कारवाही प्रकृया पनि शुरु भइसकेको थियो तर मुद्दाका कारण मात्र केही दिनलाई रोकिएको थियो ।
को को परेका थिए कारवाहीको लिस्टमा ?
–बजार क्षेत्रमा उपस्थित नहुने ।
–कारोवारमा संलग्न नहुने ।
–अन्य व्यक्तिलाई कारोवार गर्न दिएका ।
–बजार अनुगमन र नविकरणको समयमा मात्र उपस्थित हुने ।
–विदेशमा रहेको अन्य व्यक्तिबाट कारोवार सञ्चालन गराएको ।
–पसल भाडामा लगाएको ।
निलो लिष्टमा कस्ता व्यापारी ?
–कारोबारमा कहिलेकाँही संलग्न भएपनि स्वयंले निरन्तर कारोवार नगरी अन्यबाट कारोवार गराएको ।
–बजार क्षेत्रमा नियमित उपस्थित हुँदा पनि कारोवारमा संलग्नता नदेखिएको ।
–आफन्तबाट कारोवार सञ्चालन गराएको ।
–विदेशमा रहेका परिवारका सदस्य, आफन्तबाट कारोवार गराएको ।
–सम्झौता विपरितका बस्तुको कारोवार गरेको ।
पहेलो लिष्टमा पर्नेहरु
–स्वयंका साथसाथै अन्य व्यक्तिहरुबाट समेत कारोवार गराएको ।
सेतो लिष्टमा पर्नेहरु
–पूर्ण रुपमा बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली २०६० र सम्झौता अनुसार कार्य गर्नेहरु ।
कस्तालाई कस्तो कारवाही ?
रातोलाईः सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै पत्र बुझाई इजाजतपत्र खारेज गरी सम्झौता रद्द किन नगर्ने भनि ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग्ने । चित्त नबुझे सम्झौता रद्द गरी गोला प्रथाद्धारा अरुलाई दिने ।
निलोलाई: नियमाअनुसार बसेको र व्यवसाय गरेको प्रमाणसहित ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउने ।
पहेँलो : आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने गरी सचेत गराउने ।
सेतोलाई: यसैगरी नियम पालना गर्नु भनेर हौसला दिने ।
रातो लिष्टमा पर्नेहरु कहाँका कति ?
थोक विक्रेता ४५ जना
सहकारी समूह ५ जना
माछा व्यापारी ६ जना
२४ टहराका व्यापारी ५ जना
३८ टहराका व्यापारी २ जना
खुद्रा व्यापारी २१ जना
भण्डारमा १४ जना
फलफूल बजार २ जना र
बालाजुका खुद्रा व्यापारी ९ जना
निलो लिष्टमा पर्नेहरु कहाँका कति ?
थोक विक्रेता ६५ जना
फिससेडमा फलफूल ८ जना
सहकारी समूह १ जना
माछा ६ जना
२४ टहराका व्यापारी १८ जना
३८ टहराका व्यापारी ६ जना
केज भण्डारण १ जना
फलफूल बजार १ जना
बालाजुका खुद्रा व्यापारी १ जना
सटरमा कारोवार ३ जना
पहेंलो लिष्टमा पर्नेहरु कहाँका कति ?
थोक विक्रेता १६० जना
सहकारी समूह ८ जना
माछा व्यापारी ११ जना
२४ टहराका व्यापारी १ जना
३८ टहराका व्यापारी १ जना
खुद्रा व्यापारी ८ जना
भण्डारमा १ जना
फलफूल बजार ७ जना र
बालाजुका खुद्रा व्यापारी ८ जना
सेता लिष्टमा पर्नेहरु कहाँका कति ?
थोक विक्रेता ४० जना
माछा व्यापारी ३ जना
२४ टहराका व्यापारी ६ जना
३८ टहराका व्यापारी ३६ जना
खुद्रा व्यापारी १४ जना
बालाजुका खुद्रा व्यापारी ३२ जना
के–के गरे मातृकाले ?
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले भदौ ४ गते कालीमाटी तरकारी बजारमा विहान ३ बजे छापी मारी दुईटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएका थिए । उपत्यका बाहिरबाट फर्सी र काक्रो लिएर आएका दुई ट्रकसँग बिलविजक लगायतका कागजात नभेटिएपछि विभागको अनुगमन टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
नियन्त्रण लिएका दुईटै ट्रक कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा पठाएको थियो । त्यसपछि व्यपारीहरु नाराजुलुस गर्न थालेका थिए । व्यपारीहरुको भिड बढ्दै गएपछि अनुगमनमा गएकाहरु तरकारी बजार विकास समितिको चेन गेटभित्र छिरेको थियो । त्यसपछि नाराबाजीकै बीचमा अनुगमन टोलीका सदस्यहरु त्यहीभित्र थुनिए । व्यपारीहरुले चेनगेट बन्द गर्नुको साथै बजारको मुलगेटमा पनि ताला लगाएका थिए ।
त्यसपछि प्रहरी थपिएका थिए । अन्दोलन चर्किएपछि प्रहरीले तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका महासचिवलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले यसरी धडपकड गर्न थालेपछि आन्दोलन मत्थर भएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्री मातृका यादव कालिमाटी पुगेका थिए । मातृका यादव त्यहाँ पुगेपछि अनुगमनकारी निस्केका थिए र त्यहाँबाट फर्केका थिए । व्यपारीहरुले भदौ ५ गते तरकारी बजार बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । तर त्यसको भोलिपल्ट बन्द फिर्ता लियो ।
भदौ ७ गते मन्त्री मातृका यादवले अनियमित गरी बसेका ९८ वटा स्टललाई खारेज गर्ने निर्णय गरे र त्यसको प्रकृया पनि शुरु गरे ।
कुलमानमाथि खनिए मोदी